PE, PP, PVC Uye Wood Plate Extrusion Line - China PE, PP, PVC Uye Wood Plate Extrusion Line Mutengesi, Factory -Jwell
WPC yekuwedzera mutsara: Inotora dhizaini yakakosha ye screw & dhiramu, chakuvhu uye extruder yehuni zvigadzirwa zvepurasitiki. Jwell kambani zvigadzirwa zvakateedzana: Imwe nhanho nzira gobvu bhodhi extrusion mutsetse, Imwe nhanho nzira WPC mbiri extrusion mutsetse; WPC pelletizing extrusion mutsetse uye akasiyana marudzi e WPC muforoma.
Zvigadzirwa zveWPC zvinogona kugadzirwa nematanho maviri extrusion muchina, kana pelletzing kutanga ipapo kuburikidza ne extrison muchina, inozoponesa simba nenzvimbo, ine chimwe chinhu: chakakwira kuburitsa, yakatsiga extrusion kumanikidza, yakakwira plastiki, uye musanganiswa wakanaka. Optimized sikuru dhizaini ine diki yekucheka simba, uye hazvisi nyore kutema huni fiber, yakanaka plastiki. Iyi extrusion tambo inogona kuburitsa PE, PP kana PVC WPC zvigadzirwa zvigadzirwa, Main application ndeye yehuni tireyi, mukati nekunze uriri, nekunze kushongedza, zvichingodaro,
Jwell DYSSJ imwechete shaft shredder